Zvinoitwa ne SKM - Dongguan Sunkia Machinery Co., Ltd.
Otomatiki Opp Laminating Machine
Otomatiki Hwindo Laminating Machine
Otomatiki Laminating Uye Bemuchina Muchina Mutsetse
Otomatiki Kutenderera Kuna Roo Laminating Machine
Otomatiki Thermal Laminating Machine
Otomatiki UV Varnishing Machine
Otomatiki Varnishing Uye Calendering Machine
Yakakwira-inomhanya-ina-musoro UV Varnishing Machine
Otomatiki UV Spot Varnishing Machine
Yakakwira-inomhanya Calendering Machine
Rigid Bhokisi yekumaka Machine
Tekinoroji masevhisi anozoitwa mune ese maficha, kubva pre-kutengesa maitiro kusvika mushure-kutengesa maitiro. Zvinoenderana neese mutengi akasarudzika maficha uye zvinotarisirwa, tinokupa zvakagadziriswa mazano uye masevhisi.
nyanzvi dzinogona kupa kudzidziswa kwakasiyana pakugadzira kwedu, kana zvakananga kunzvimbo dzevatengi. Isu tinove nechokwadi chekuti vashandi vako vanonzwisisa michina yeSKM zvakanaka kwazvo kuti uve nechokwadi chekugona kwako kukuru uye negoho.
Tinotaura nezvezvivakwa zvako. Kubudikidza nezviyero zvese uye kuongororwa, tinokuzivisa zvese kugadzirisa, kugadzirisa uye kugadzirisa izvo zvivakwa zvako zvinoda. Uye kuburikidza neyedu yekuchengetedza, isu tinofanotaura zvese zvingangodaro matambudziko, batsira muchina wako kuti ushande mushe musina nguva yekuzorora.
SKM ine yakarongeka-yakachengetedzwa zvikamu zvekuchengetedza, ese mativi akakodzera zvakakwana uye akagadzirira kutumirwa kune chero epasi. Isu tinovimbisa ipfupi nguva yekuendesa uye hwakanakisa mhando. Kurairidzwa kwegungano kunozoendeswa pamwe needu eparutivi zvikamu.
Kuti tipe yakanakisa zvigadzirwa zvigadzirwa kune vatengi vedu, SKM haimbomira kushanda pakuvandudza nekuvandudza zvigadzirwa zvedu. Tiine makore anopfuura gumi nemaviri echiitiko mumunda, isu tiri nyanzvi yekuvandudza zvivakwa zvako zvemabasa ako chaiwo.
289 # Jiaoyu Road, Dalingshan Town, Dongguan Guta, Guangdong, China
nokunyora magwaro KuNhau Yedu